Humni waraanaa Sudaan Daandii qilleensaa Kaaba Itoophiyaa, xiyyeeffannoo misaayelaa jala galchuun barame. – Kichuu
Humni waraanaa Sudaan Daandii qilleensaa Kaaba Itoophiyaa, xiyyeeffannoo misaayelaa jala galchuun barame.
Oduu Amma Nugahe: Humni waraanaa Sudaan Daandii qilleensaa Kaaba Itoophiyaa, Humaraa, Laalibalaa, Gondar fi Bahardaar xiyyeeffannoo misaayelaa jala galchuun barame.
Waraanni Sudaan taarkaanfii kana kan fudhate ega Magaala #Abduraafii (Mi’iraab Armaahacoo) fi #Mantaa_Wuhaa jedhaman irratti loltoota Itoophiyaa 50 ajjeesee lafa haaraa bal’aa qabatee booda.
Weerarri Sudaan kun hammaataa waan dhufeef Humni qilleensa Itoophiyaa haleellaa jeettii geggeessuuf qophiirra jiras jedhameera. Sababaa kanaaf balaliin qilleensaa bakkoota olitti tuqaman kanatti adda cite.
Daandiin qilleensa Itoophiyaa garuu sababa haala qillesnsaatiin jedhus, haalli qillensaa yeroo Bonaa naannoo
Kanaa garuu hedduu mijataa dha.
Waraanni Suudaan magaalaa #Salaambar jedhamu guutumaan guutuutti barbadeessuun qabatee jira. Waraanni ammas ittuma fufee deemaa kan jiru yoo tahu, Korhumerii(Xefere Warq) fi Abderaa fa’a qabachuuf yeroo ammaa waraana gaggeessaa jiru. Jiraattonni naannoo kanaa buqqa’anii baqachaa kan jiran yoo tahu, qabeenya,midhaanii fi beeyladoonni hedduun waraana Suudaaniin fudhatamanii jiru.
Guyyaa har’as RIB fi milishaan dhibbaan lakkaa’aman ajjeefamanii jiru. Ummanni nagaan ajjeefamuu fi madaa’uunis baramee jira.
Sudan army clashes with Ethiopia forces, regains control of seized borderland – https://t.co/5lT8lSyAZo pic.twitter.com/vQ1au7LByk
— Kichuu (@kichuu24) February 6, 2021
Icciitii Masaraa mootummaa keessaa baate! – https://t.co/9fp6YKTgV4 pic.twitter.com/GmLiHQ660K
Oduu gammachuu itiyoophiyaan diigamuif deemti oromiyaan niwalaboomti
Waraanni Suudan Magaalota naannoo Amaaraa hanga Goondaritti jiran too’aanna jala oolchuu ibsee jira. Galgala kana kan kennan ajaajaan waraanaa Suudan Waarana Naannoo Amaaraa barbadeessaa meeshaalee gugurdaa booji’aa Goondar gahuu ibsee jira.
Beenjamiin Netanaayuu "ግዜዉ አሁን ነዉ?" Kan maaliiti?
Tamasgen Xurunaa Finfinnee keessatti Rasaasa ciniinee Hospitaala ciisee jira.
Juwaar Abdusamad Mummee waraana Abiy kan humna addaa Oromiyaa jedhamuun amma waregame.